ओलीको राष्ट्रबाद ना’ङ्गिदै, रअ प्रमुखकाे अगाडि के भयो यस्तो ? भिडियो हेर्नुस् – PathivaraOnline
Home > भिडियो > ओलीको राष्ट्रबाद ना’ङ्गिदै, रअ प्रमुखकाे अगाडि के भयो यस्तो ? भिडियो हेर्नुस्
admin October 25, 2020 भिडियो, समाचार	0
काठमाण्डौं । कुटनितिक मामलाकाका जानकार हेमन्त सेढाईले सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलिले बिदेशी प्रभु सामु देश र जनतालाई धितो राखेको बताउनु भएको छ । आईतवार नियात्रा टिभीका लागि दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा वहाँले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
भारतका रअ प्रमुख केही दिन अघी नेपाल आएको र प्रधानमान्त्री निवास बालुवाटारमा गोप्य बार्ता गरिएको बिषयमा आपत्ति जनाउनु भएको छ । वहाँ ले भन्नु भयो-नेपालका प्रधानमन्त्री र सामन्त कुमार बिच दुई वटा कुरामा म्याच फिक्सिङ भएको छ ।
पहिलो कुरा भनेको एउटा चुच्चे नक्साको सम्बन्धमा अथवा नेपालको जुन भुभागहरु भारतले मिचेको छ लिपुलेक,लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र ३ सय ९५ बर्ग किलोमिटर हो अब चुच्चे नक्साको बिषयमा नबोल्ने, नम्बर २ नागरिकता बिधेकको सन्दर्भमा बैवाहिक अंगीक्रितको सम्बन्धमा ७ बर्षको प्रावधान राखिएको थियो अघी नबढाउने सर्त भएको छ ।
त्यस्तै नेकपाका नेता माधव नेपाल र प्रचन्ड पनि रुस्ट भएको बेला यो सरकार तिहार क’ट्न पनि पाउँछ या पाउँदैन भन्ने त्रा’स ले आफ्नो मर्यादा भुलेर देशको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुखले बिदेशी कर्मचारीलाई बालुवाटार बोलाई भेट्नु कुट्नितिकमामलामा कती कम्जोर छौ भन्ने कुराको उदाहरण हो यो भेट ।
फेरि धर्ती माताले गरिन भबिस्यवाणी, के गर्दैछिन यस्तो नयाँ बर्षमा? – भिडियो हेर्नुस्